ndinoita sei unistall msn mamiriro ekunze uye ndoimisazve
Dzorerazve Kana Kuisazve Mamiriro ekunze App Mune Windows 10
Windows 10 ngarava dzine akawanda maapplication. Imwe yacho ndeyeMamiriro ekunze app. Iyo Mamiriro ekunze app, sezita zvarinotaura zvese, inounza kwauri ruzivo rwemamiriro ekunze.
Iyo Weather app inoshanda zvakanyanya nguva dzese. Asi kana uine nyaya neApple app, unogona kudzoreredza kana kuisazve iyo Mamiriro ekunze app kugadzirisa ayo matambudziko.
Inotevera ndiyo nzira mbiri dzekumisazve / kuisazve Mamiriro ekunze app.
Dzorerazve / dzorerazve Weather mamiriro mu Windows 10
Dzorerazve iyo Weather mamiriro kana isiri kushanda nemazvo. Semuenzaniso, kana iyo Weather mamiriro asiri kuvhura kana kurodha data, unogona kuyedza kuseta iyo Mamiriro ekunze app.
Step 1: Vhura purogiramu yeMapirogiramu. Click Apps uye ipapo chengeta Zvirongwa & maficha.
Step 2: Bhura pasi pasi maapplication runyorwa kuti uone mamiriro okunze kupinda kweapp. Dzvanya pairi kuti uone Zvinyorwa zvitsvaga batanidzo. Dzvanya Zvinyorwa zvitsvaga kubatana.
Step 3: Mu itangezve chikamu, chengetedza itangezve bhatani.
Kutanga Windows 10 Chitubu Vagadziri Gadziriso (v1803), kugadzirisa zvakare kuchaisazve iyo app. Iwe ucharasikirwa neese Weather data data yakachengetwa paPC yako.
Baya itangezve bhatani zvakare kuti upedze kugadzirisazve uye kudzorera basa.
Method 2 ye2
Nemaoko kusunungura Mamiriro ekunze uye nekuisa
Kana nzira iri pamusoro ikasakubatsira kugadzirisa nyaya yacho, unogona kusunungura mamiriro ekunze app woisa kopi nyowani yakafanana. Heano maitiro ekuzviita izvozvo.
Step 1: Enda kune Settings app > Apps > Zvirongwa & maficha.
Step 2: Tsvaga iyo mamiriro okunze kupinda kweapp, tinya pairi wobva wadzvanya Bvisa bhatani.
Step 3: Baya Uninstall bhatani zvakare kana iwe ukaona yekusimbisa dialog kuti uninstall iyo app.
Step 4: Vhura iyo chitoro app, tsvaga iyo MSN Weather app uye wozoisa.
AccuWeather ndeimwe yakanaka mamiriro ekunze app ye Windows 10
Dzorerazve uye dzoka Kadhi yeKapuro In Windows 10
Maitiro Ekumisazve Uye Kuisazve Iyo Kamera App Mune Windows 10
10 Yakanyanya Yemahara Yemamiriro ekunze Mapurogiramu eApple muna 2017
Maitiro ekuti Factory Reset Windows 10